Lozam-pifamoivoizana :: Lehilahy iray voahosin’ny kamiao teny Talatamaty - ewa.mg
Lozam-pifamoivoizana :: Lehilahy iray voahosin’ny kamiao teny Talatamaty
News - Lozam-pifamoivoizana :: Lehilahy iray voahosin’ny kamiao teny Talatamaty
Nandriaka ny ra teny amin’ny lalam-pirenena fahefatra teo Andranotapahina, miakatra an’i Talatamaty, afak’omaly alina. Lehilahy iray, dimy amby telopolo taona, no namoy ny ainy tamin’izany. Ny zandary avy ao amin’ny Borigadin’ ny zandarimaria Talatamaty no nitondra sy nametraka ny razana eny amin’ny tranom-patin’ny hopitaly Joseph Ravoahangy Andrianavalona. Teny am-panaovana fisafoana amin’ny alina toy ny mahazatra izy ireo no nahita ny loza.
«Potika tanteraka ny vatan’io lehilahy io. Naheno izahay fa voadonan’ny kamiao izy», hoy ny zandary eny an-toerana. Milaza ho efa manao ny fikaroham-baovao momba an’ilay fiarabe nanao loza ny mpanao famotorana. Teny amin’ny tranom-paty kosa vao nosavaina sy nojerena akaiky ny razana. Nahitana kara-panondro teny aminy. Fantatra tamin’ izany fa avy eny amin’ny kaominina Ambohimanambola ity namoy ny ainy ity.
Efa nisy ny fampilazana ataon’ny mpitandro filaminana an’ireo izay mety ho fianakaviany.
L’article Lozam-pifamoivoizana :: Lehilahy iray voahosin’ny kamiao teny Talatamaty est apparu en premier sur AoRaha.
Jery taratra: lamina handrosoana amin’izay…
Nifarana ny famoahan’ny Ceni ny fironana amin’ny voka-pifidianana. Miroso amin’ny famoahana ny voka-pifidianana vonjimaika amin’izay izy. Tsy inona fa ny fikirakirana ny fitantanana an-tsoratra (PV) tena izy avy any amin’ny SRMV amin’ny distrika tsirairay avy. Azo atao amin’izay ny manao fampitahana PV.Nilaza ny eo anivon’ny Ceni fa tsy mitarika ho famoahana am-ponja avy hatrany izay kandidà efatra voatana vonjimaika any am-ponja ny fahalaniana amin’izao fifidianana depiote izao. Mitohy ny raharaham-pitsarana azy ireo, ary ny HCC no manapaka ny amin’ny fahabangan-toerana raha mbola tsy mivoaka ny fonja izy ireo.Hiova ny fankalazana ny 26 jona amin’ity taona ity. Nofoanana, ohatra, ny fanasan’ny filohan’ny Repoblika ireo olo-manan-kaja eto amin’ny firenena, ny masoivoho vahiny… Ao anatin’ny politika fitsitsiana izany. Hatao ny tolakandro ny matso lehibe eny Mahamasina hahazoan’ny any amin’ny faritany manaraka azy.Nilaza ny filohan’ny Sendikàn’ny mpitsara eto Madagasikara (SMM), fa mila fanovana na foanana ny lalàna momba ny Fitsarana avo (HCJ) hitsarana mpitondra ambony. Sarotra sy ela ny dingana arahina, ka tsy hisy ho voatsara amin’izany. Fitsarana tsotra ihany no tokony hitsara azy ireo rehefa tsy eo amin’ny fitondrana.Namoaka fanambarana ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC), Tsy hisy fiantraikany amin’ny fanajana ny safidim-bahoaka ny faneriterena sy ny fanodinkodinana ny saim-bahoaka rehetra. Manao ny asany ao anatin’ny tsy fiandaniana na fitongilanana araka ny lalàmpanorenana sy ny lalàm-pifidianana izy.Amin’izany, aiza ho aiza ny fiainam-bahoaka: efa tena irosoana ny fampanjakana ny fandriampahalemana, ohatra? Miisa 36, ohatra, ireo zandary tanana am-ponja noho ny firaisana tsikombakomba amin’ny dahalo, ny tsy fanarahan-dalàna… Na izany aza, tsy ilaozan’izay fitarainana etsy sy eroa ihany.R.Nd. L’article Jery taratra: lamina handrosoana amin’izay… a été récupéré chez Newsmada.
Faritra Menabe: hanamboatra lalana sy hamokatra angovo i Korea Atsimo
Nihaona vao haingana ny lehiben’ny faritra Menabe, i Gilbert Romain, sy ny masoivohon’i Korea Atsimo eto amintsika, i Lim Sang-woo. Tetikasa niaraha-nidinika ny fanamboaran-dalana sy ny famokarana angovo. Mbola vitsy ny orinasa manangana tetikasa any amin’ny faritra Menabe noho ny tsy fahampian’ny famatsiana angovo sy ny faharatsian-dalana. Nambaran’ny masoivohon’i Korea Atsimo fa ireo no antony lehibe misakana ny fampandrosoana, tsy ahitana fampiasam-bola any amin’iny faritra iny. Efa nasian-teny teo aloha, ny taona 2015, ny fampindramam-bola ataon’i Korea Atsimo an’i Madagasikara, 30 tapitrisa dolara. Voateny tamin’izany ny hanamboarana ny lalana RN35, manelanelana an’i Morondava sy Mahabo. Any amin’ny faritra Menabe ihany, ry zareo Koreanina hamokatra angovo sy hanatsara ny lalana mankany amin’ny Tsingin’i Bemaraha sy Tsingin’i Bekopaka. Nambara fa hatao tsara ireo lalana ireo hisintonana mpizahatany sy ho fiarovana ny tontolo voajanahary. Ao anatin’ny fifanarahana ihany koa ny fanamboaran-dalana mampitohy an’Analamisampy sy Manja. Tsara ho fantatra fa aorian’i Japoney, ry zareo Koreanina no faharoa amin’ny fampiasam-bola any Ambatovy. Nambara tamin‘ny fihaonana ny fandrosoan’ny teknolojia koreanina, toy ny hita amin’ny Samsung sy ny Kia. Efa tany amin’ny taona 1963 ny fifandraisana teo amin’i Madagasikara sy Korea Atsimo. Novelomina indray izany fifandraisana izany, ny taona 1993. Hatramin’izay, mahatratra 200 tapitrisa dolara izao ny varotra eo amin’ny firenena roa tonta. Tsiahivina fa anisan’ny firenena mahantra indrindra eran-tany i Korea Atsimo nandritra taona 60, afaka nihoatra izany aty aoriana rehefa notohanan’ny Fikambanana iraisam-pirenena maro, ary ankehitriny mitondra ny anjarany hanosika hampiakatra ny firenena mahantra toa an’i Madagasikara. R.MathieuL’article Faritra Menabe: hanamboatra lalana sy hamokatra angovo i Korea Atsimo a été récupéré chez Newsmada.
Tsy fanaovana aroloha, tsy fananana fiantohana sy fahazoan-dàlana. Tao anatin’ny adiny efatra monja dia efa nahatratra 404 ireo kodiaran-droa tsy nanara-dalàna tetsy amin’ny 67ha, nandritra ny fisavana tampoka nataon’ireo pôlisy misahana ny lozam-pifamoivoizana. Tsy navela nihetsika moa ireto mpitondra azy raha tsy ara-dalàna tanteraka ireo antony nanajanona azy ireo. Eo anatrehan’ny lozam-pifamoivoizana samihafa, saika namoizana ain’olona foana tato ho ato izay, dia nanapa-kevitra ny teo anivon’ny pôlisy misahana ny lozam-pifamoivoizana fa hanao hetsika manokana ho fanentanana sy fampianarana ho amin’ny fanarahan-dalàna. Ireo kodiaran-droa aloha no tena notilina tamin’izany, satria araka ny fanazavana azo dia saika izy ireo foana no mamoa-doza sy mahatonga loza ho an’ny hafa. Tao anatin’izany hetsika, nanditra ny fijoroan’ireo pôlisy maromaro tao anatin’ny adim-pamantaranandro efatra, dia betsaka ireo mpitondra kodiaran-droa no voasava teny an-toerana. Maro ary tena maro, an-jatony mahery ireo tra-tehaka tamin’ny tsy fanarahan-dalàna. Raha ny antontan’isa navoakan’ny pôlisy, dia nahatratra 306 ireo mpitondra môtô tsy nanao aroloha, 93 ireo tsy manana taratasy fiantohana amin’ny loza, ary dimy kosa ireo tsy manana fahazoan-dalana hitondra kodiaran-droa. « Ireo antontan’isa ireo dia manamarika fa betsaka ireo mpitondra môtô no tsy manara-dalàna ka isan’ny antony mampitombo ny lozam-pifamoivoizana eto an-dRenivohitra ». Vokatr’izay moa dia nandray fepetra ireo pôlisy ka nogiazana sy tsy navela hihetsika teo an-toerana ireo kodiaran-droa nentin’izy ireo. Ireo mpitondra azy kosa dia nasaina naka aroloha na nanamboatra taratasy fiantohana ary naka fahazoan-dalana mamily aloha. Fantatra, fa tsy nijanona tamin’ireo mpitondra môtô ihany ilay hetsika teny an-toerana, fa nisy ihany koa ny fisavana ireo fiara nandalo. Ary nisy tamin’ireo mpamily azy ireny no tsy nitondra fahazoan-dalana ka nasaina naka izany aloha vao afaka nandeha. Tetsy andanin’izay, na dia efa nihatra efa ho volana vitsivitsy izay ilay fahazoan’ny sarety mivezivezy raha tsy amin’ny ora tokony handehanany, dia mbola betsaka ireo minia mandika ka voasakana teny an-toerana ihany koa. Ireto farany moa dia tsy navela hihetsika toy ireto mpitondra môtô sy fiara namany, raha tsy tonga ny ora ahafahan’izy ireo mandeha. Marihana hoy ny fanazavana, fa tsy tokony horaisina hoe fanasaziana akory ny tranga toy izany, fa fanazarana ny olona hanara-dalàna, indrindra mba ho fiarovana ny ain’izy ireo. Marobe tamin’ireo mpampiasa làlana no nankasitraka ny hetsika toy izao, ary nilaza fa tokony ho- tohizana foana. Saingy hoe aleo rehefa mba fananarana sy fampanarahan-dalana dia mijanona ho izay fa tsy sanatria hiitatra amin-javatra hafa : filam-baniny, fangataham-bola, fanararaotam-pahefana ary ireo endrika kolikoly isan-karazany; izay efa hita hatreto fa nezahanareo hialàna sy hiadiana mafy tokoa. Eny fa na dia ao ihany aza ilay hoe « tanana efa zatra mitsotra » sy ny « saonjo iray saha tsy hilaozan’izay hamarara » … m.LL’article Lalam-baovao 67ha : Môtô 404 tsy ara-dalàna, tsy navela nihetsika a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Kabary – Fimpima: homanina ny fanokafana ny taom-pianarana
Tontosa, tany Toliara ny asabotsy 17 aogositra teo, ny « Herinandron’ny kabary » fanaon’ny foiben’ny Fikambanan’ny mpikabary malagasy maneran-tany (Fimpima maneran-tany) isan-taona. Nambaran’i Hanitra Andriamboavonjy, filohan’ny foibe Fimpima maneran-tany, fa « anisan’ny asa lehibe miandry taorian’iny hetsika tany Toliara iny ny fanomanana indray ny fisokafan’ny taom-pianarana manaraka kabary». Ankoatra io, nolazainy ihany koa fa hotanterahina any anivon’ny mpikambana ifotony ny tatitry ny « Herinandron’ny kabary ». Fahatelo, « tontosa iny ny an’ny foibe fa hiroso hanatanteraka ny tetikasny ihany koa ny isan-tsehatra rehetra ao anatin’ny Fimpima maneran-tany, toy ny faritany sy ny sampana », hoy hatrany i Hanitra Andriamboavonjy. Tsiahivina fa raha tamin’ity taom-pianarana ity, teo ho eo amin’ny 1 300 ny isan’ny mpianatra kabary ao amin’ny Fimpima maneran-tany. Ny 90 tamin’ireny, tany ivelan’i Madagasikara.Fantatra fa anisan’ny vaindohan-draharaha ho an’ny fikambanana ny fanomezana fiofanana ny mpikambana ao aminy, indrindra ireo miadidy ny fampianarana, hanana lenta mitovy ny mpianatra miofana eo anivon’ny Fimpima.HaRy Razafindrakoto L’article Kabary – Fimpima: homanina ny fanokafana ny taom-pianarana a été récupéré chez Newsmada.
Bianco – Ady amin’ny kolikoly :: Nilaza hiady amin’ny tsimatimanota ny tale jeneraly vaovao
Hentitra ny tenin’Andrianirina Laza Eric Donat, tale jeneraly vaovaon’ny Birao mahaleotena miady amin’ny kolikoly (Bianco) raha nanao ny fianianany, omaly, tetsy amin’ny lapan’ny Fitsarana tampony Anosy. Nametraka vina amin’ny fampihenana ny fanjakazakan’ny fahalovana eto Madagasikara sy ny fanenjehana an’ireo tsimatimanota izy ary niantso ny fitondram-panjakana sy ireo sampana rehetra miady amin’ny kolikoly mba hifanome tanana aminy. Nolazainy fa “tena hiady tokoa izahay fa tsy hanao sarin’ady satria manantena vokatra ny vahoaka malagasy”. Nanararaotra nampahafantatra ireo tetik’ady hoentiny miasa mandritra ny dimy taona ity tompon’andraikitra vaovao ity. “Harahina maso akaiky ny fitantanana volam-panjakana sy fampidirana mpiasam-panjakana, hampiharina tsy misy teritery ny lalàna ary tsy hanavahana na iza na iza ny fanasaziana”, hoy izy. Notsindriany anefa fa “na eo aza ny finiavana hanao zavatra goavana dia zava-poana izany raha tsy misy ny fiaraha-miasa amin’ ny hafa sy hoenti-manana amin’izany”. Notontosaina, omaly, koa ny famindram-pahefana teo amin’ity tale jeneraly vaovaon’ny Bianco ity sy ny tale jeneraly teo aloha, Andriamifidy Jean Louis. Tompon’andraiki-panjakana maro nahitana ny Filoham-pirenena sy minisitra samihafa ary olona manan-kaja maro isan-tsokajiny no nanotrona ny lanonana. Nicoh RICHMAN L’article Bianco – Ady amin’ny kolikoly :: Nilaza hiady amin’ny tsimatimanota ny tale jeneraly vaovao est apparu en premier sur AoRaha.
Aogositra – septambra – oktobra: averina ny fampiatoana fanaratoana drakaka
Nandray fanapahan-kevira ny minisitera misahana ny jono fa averina, manomboka ny volana aogositra izao hatramin’ny 31 oktobra 2019, ny fampiatoana manerana ny Nosy ny fanaratoana drakaka. Taona maro, araka ny tatitra nataon’ny minisitera, tsy nisy izay fanakatonana ny fanaratoana drakaka izay, lasa fihariana gaboraraka. Misy fiantraikany ratsy lehibe izany ka izao fanapahan-kevitra izao noraisina hifehezana sy hampanarahan-dalàna io lalam-pihariana io, hampitombo ny vokatra drakaka sy hampanara-penitra izany, araka izay takina amin’ny tsena eto an-toerana sy any ivelany.Izay famerenana ny fanakatonana ny jono izay, tafiditra ao anatin’ny fandaharanasan’ny minisitera ho fanatsarana ny lalam-pihariana hampitombo ny fidiram-bolan’ny mpanjono. Rehefa mitombo sy tsara ny vokatra, mitombo, manaraka izany, koa ny tolotra ho an’ny ho an’ny tsena eto an-toerana sy ny fanondranana azy. Mampiditra vola vahiny izay fanondranana izay, singa iray mampantanjaka ny toekarena. Hahatrarana izany ny hisian’ny fitantanana mangarahara momba ny fitrandrahana ny harena an-dranomasina.Mangataka fiaraha-miasa amin’ny tsy miankina ny minisitera amin’izany sehatra izany, mba ho ara-dalàna sy hanara-penitra. Tanjona ny fiarovana ny mpanjifa ho amin’ny fahavitan-tena amin’ny sakafo sy hahafahana mifaninana eo amin’ny tsena iraisam-pirenena. Mora ho an’ny minisiteran’ny Fambolena sy ny jono ny mametraka fepetra fa sarotra kosa ny fanaraha-maso izay fanakatonana ny jono izay manerana ny Nosy. Na eo aza ny afaka manao izany, tsy ferana ny mety ho fisian’ny kolikoly sy ny varo-maizina. R.MathieuL’article Aogositra – septambra – oktobra: averina ny fampiatoana fanaratoana drakaka a été récupéré chez Newsmada.